Myanmar Youth Media Club - ထီးရိပ်မဲ့မိုးသည်းညရဲ့ စိတ်ကူးသံစဉ်
PoorBest ထီးရိပ်မဲ့မိုးသည်းညရဲ့ စိတ်ကူးသံစဉ်
Saturday, 09 October 2010 19:00	Written by Administrator	Thoughts_sec	- Thoughts	TwitterSocButtons v1.4
နိဒါန်း ___ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီစိတ်ကူးယဉ်မှုဟာ ထင်မှတ်မထားတဲ့အချိန်၊ နေရာမှာ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့၊ ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တဲ့အခါ မှင်သက်တွန့်ဆုတ်နေလိုက်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဟာ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်အဖြစ်ပဲ ကိုယ့်ရာဇဝင်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောစမှတ်အဖြစ် တနုံ့နုံ့ ကျန်ရစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့.... ဒါဟာ အပြစ် (သို့မဟုတ်) ရွံ့နောင်တပါ....။ (၁) ကျွန်တော်ကပဲ မိုးရက်တွေကို မြတ်နိုးနေမိတာလား၊ မိုးနေ့ရက်တွေကပဲ ကျွန်တော့်ကို တခုတ်တရ မြတ်နိုးနေစေမိတာလား မသိ။ ကျွန်တော့်အမှတ်တရတွေဟာ မိုးရေစက်တွေ ပြည့်လျှမ်းနေတတ်သလို၊ ကျွန်တော် လွမ်းတမ်းမိတတ်တဲ့ အရာတွေမှာလည်း မိုးဖြောက်တွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတာကများပါတယ်။ အခုလည်း မိုးညတစ်ညရဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပုံပြင်ကို ကျွန်တော် သွားသတိရမိပြန်တယ်။ နင့်ခနဲ ခံစားချက်တွေ ပျို့တက်လာမိတာကလွဲလို့ ကျွန်တော့်ဒဏ်ရာတွေကတော့ ကျက်သွားခဲ့ပါပြီ. . . .။(၂) ကျွန်တော် အိမ်ကထွက်ခဲ့တော့ ညနေ ၆နာရီလောက်လို့ ထင်ပါတယ်။ Adidas ဘေး လွယ်အိတ် အနက်ရောင်ကလေးထဲမှာ ကျောင်းသုံးရုရှားဖတ်စာ စာအုပ် ၂ အုပ်လောက်နှင့် မှတ်စုစာအုပ်လေးတစ်အုပ်။ နောက် ဘောလ်ပင်၊ ခဲတံ၊ မှင်ဖျက်ဆေး စတာတွေ ထည့်ထားတဲ့ zip တပ်အိတ်ငယ်လေးတစ်ခု။ ဒါ ကျွန်တော်ဘယ်သွားသွား အမြဲထည့်သွားဖြစ်တာလေးတွေ။ လွယ်အိတ်ထဲဘာမှမရှိဘဲနှင့် ကျွန်တော်အပြင်လျှောက်မသွားတတ်။ အဲ.. ဒီနေ့ကျမှ မေ့ကျန် ရစ်ခဲ့တာက ကျွန်တော်ဘယ်သွားသွားဆောင်ဖြစ်တဲ့ ထီးကလေး။ ကျွန်တော်ကလက်ထဲမှာ ဘာမှမကိုင်သွားရရင်နေမယ်၊ ဟိုနားဒီနားလေး လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်တောင် ထီးတစ်ချောင်း တော့ အမြဲယူသွားတာမဟုတ်လား။ အရင်က ဂေါက်ထီးရှည်ကို ကိုင်လေ့ရှိပေမယ့် နောက်ပိုင်း အမြဲဆောင်သွားဖြစ်တာကတော့ ဖဲသားခေါက်ထီးပါပဲ။ ဂေါက်ထီးက ဘတ်စ်ကားစီးရင် အဆင်မပြေဘူးလေ။ ကျောင်းကမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုအမြဲ စနောက်လေ့ရှိတယ်။ ယောက်ျားလေးတန်မဲ့ နေပူမခံ၊ ချွေးထွက်မခံ၊ မိုးစိုမခံ၊ ထီးကြီး တကားကားနဲ့ အဖြစ်သည်းလှချည်ရဲ့တဲ့။ ပြောပါစေလေ။ ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမယ်လို့ ဦးတည်ချက်မရှိဘဲ ဒီလိုပဲ ညနေခင်းအိမ်မှာနေလေ့မရှိတာမို့ မြို့ထဲဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ရုပ်ရှင်ကောင်းရင် ဝင်ကြည့်မယ်။ အင်တာနက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ဆိုင်ဝင်၊ အွန်လိုင်းတက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံခဲ့ရင်ချိန်းပြီးသွားတွေ့လိုက်မယ်။ စကားစမြည်ပြောကြမယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း လိုင်းကားလျှောက်စီးပြီး အအေးလေးဘာလေး ဝင်သောက်မယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်က ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ အပြင်ထွက်နေရတာကို နှစ်သက်တဲ့သူမဟုတ်လား။ ကျောင်းကပြန်ရောက်၊ ရေမိုးချိုး၊ ထမင်းစားသောက်၊ အိမ်စာတချို့ရေးပြီးတာနဲ့ ကမန်းကတန်းပြန်ထွက်လာခဲ့တာမို့ လွယ်အိတ်ထဲမှာ ထီးပါလား၊ မပါလားစစ်ဖို့ မေ့သွားတယ်။ ဆူးလေဘုရားလမ်းမှတ်တိုင်မှာ ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီး ရန်ကုန်မြို့ ကောင်းကင်မှာ မိုးတွေအုံ့ဆိုင်းနေခဲ့ပြီ။ အဲ့ဒီကျမှပဲ ထီးကျန် ခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိရတော့တာ။ ကျွန်တော်ကားလမ်းကူးပြီး ရုပ်ရှင်ရုံတွေဘက် လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်ရဲ့ ညနေခင်းကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဆူညံလှုပ်ရှားနေလျက်က သာယာပျော်ရွှင်နေတာပါပဲ။(၃) ရှေ့ဆောင်၊ နေပြည်တော်..။ တင်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားကားတွေအားလုံး ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြီ။ ဘာမှလည်းအသစ်မတင်သေးဘူး။ စိတ်လေသွားတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ ဘယ်ရုံက၊ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို ဘယ်လောက်ကြာအောင်တင်ပြီး၊ ဘယ်ရက်မှာအသစ်လဲတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ မှတ်မထားဘူး။ ပုံသေရှိ၊ မရှိလည်း စိတ်မဝင်စားဘူး။ ကျောင်းကသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မဟုတ်တစ်ယောက်ကို မေးလိုက်တာနဲ့ ဘယ်ရုံဘာကားဆိုတာ သိနိုင်တာကိုး။ ဒီနေ့ကျောင်းမှာ tutorial နဲ့မို့ မေးဖြစ်ခဲ့ဖို့ သတိတောင်မရဘူး။ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ ဘေးကပ်လျက်က သီချင်းခွေဆိုင်နဲ့ စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ခဏအချိန်ဖြုန်းလိုက်မိတယ်။ မဝယ်ဖြစ်ဘူး။ ကော်ဖီတော့ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်မသောက်နေတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံများများစားစားမှ မပါလာဘဲ။ ဒါပေမယ့်ထိုင်နေကျ Aroma ဆိုင်လေးထဲကိုတော့ ဘာရယ်မဟုတ် တစ်ချက်ရှိုးမိလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ စတွေ့တာပဲ။နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက်။ ကျွန်တော်နဲ့အရင်က Flixster.com မှာ စရင်းနှီးပြီး အပြင်မှာ တစ်ကြိမ်ဆုံတွေ့ဖူးလို့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့တစ်ယောက်။ Dr. Lauraine Flanders။ အင်္ဂလန်သူ။ Bournemouth မြို့ဇာတိ။ အသက်က၂၇နှစ်။ ဒီက NGO တစ်ခုမှာ တာဝန်အရ အလုပ်လာလုပ်နေတဲ့သူ။ တီဘီရောဂါ ပပျောက်ရေးဌာနတစ်ခုမှာလို့ သူပြောဖူးတယ်။ သူမတူတဲ့အပြုံးချိုချိုကြောင့် သူ့ကိုတန်းမှတ်မိလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်မှာ နိုင်ငံခြားသားမိတ်ဆွေလည်း သိပ်များများစားစားမှ မရှိတာဘဲကိုး။ အစိမ်းရောင် သန်းတယ်ဆိုရုံလေး အရောင်ခပ်ဖျော့ဖျော့ ရင်ဟိုက်စွပ်ကျယ်အင်္ကျီကို ဝတ်ထားတယ်။ အောက်က သာမန်ချည်သား ဘောင်းဘီတိုနဲ့ပဲ။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်နေရင်းက ကျွန်တော့်ကိုမြင်သွားပြီး လှမ်းပြုံးပြတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော်ရှိရာ ဆိုင်ပြင်ကိုထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပြီး ကျွန်တော့်ကိုဆိုင်ထဲဝင်ဖို့ သူကပျူပျူငှါငှါဖိတ်ခေါ်တယ်။ Coffee တစ်ခွက်လောက် treat လုပ်ပါရစေတဲ့။ ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံများများမပါခဲ့တာ သတိရပြီး ကိုယ်ကလည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ဝယ်တိုက်မှာကို သိပ်မလိုလားတာမို့ အတင်းကာရောပုံစံမဖြစ်အောင် ခပ်ပါးပါးလေးဘဲ သွယ်ဝိုက်ပြီးငြင်းလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်မှတ်မထားဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ထပ်ဆုံဆည်းဖြစ်ကြတာမို့ စကားနည်းနည်းပါးပါးတော့ အေးဆေးပြောမှ ကောင်းမယ်လို့တွက်ပြီး ဟိုနားဒီနားလမ်းလျှောက်ရင်း အပျင်းပြေစကားပြောကြရအောင်လို့ ကျွန်တော်ကပဲ သူ့ကိုဖိတ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့မျက်နှာလေးဝင်းပသွားပြီး ချက်ချင်းဆိုင်ထဲပြန်ဝင်၊ ငွေရှင်းပြီးတာနဲ့ သူ့စာအုပ်လေးကောက်ပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဒီလိုကျတော့ သူ့အသွင်က ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်မာန်တွေကွာကျပြီး ပီဘိ ကလေးငယ် အဖြူထည်လေး သက်သက်ပါပဲလား။(၄) သူက ရန်ကုန်မှာနေတာသိပ်မကြာသေးပေမယ့် လမ်းတွေကို ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေပြီး စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်း တွေကိုလည်းအလွတ်ရနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တောင် သူပြောပြနေတဲ့ သူညနေစာသွားစားဖူးတယ်ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင် နာမည်တွေ၊ နေရာတဝိုက်တွေကို ကောင်းကောင်းမသိပါဘူး။ ဒီအကြောင်းတွေ သူဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောပြနေသလဲ ကျွန်တော်သေချာ မတွေးတတ်ဘူး။ ရောက်တတ်ရာရာပြောနေရင်းက သူကဒီ အကြောင်းဘက်ကို စကားလှည့်လိုက်တာမို့ပါ။ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သိစွာပဲ သူဗိုက်ဆာနေပြီလားလို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ သူက ခေါင်းကိုသွက်ခနဲခါရင်း လင်းလင်းပွင့်ပွင့်ပြန်ပြုံးပြတယ်။ အဲ့ဒီနောက် သူနဲ့ကျွန်တော် ရန်ကုန်မြို့က လူသွားလမ်းတွေနဲ့ ဈေးသည်တချို့ရဲ့ နေပုံထိုင်ပုံ ဘဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လမ်းလျှောက်လာကြရင်း စကားတွေဖောင်ဖွဲ့နေမိ ပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောပြသမျှကို သူက လေးလေးနက်နက် နားစိုက်ထောင်နေပြီး သူမရှင်းတာလေးတွေဆိုရင်လည်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပဲ ပြန်မေးပါတယ်။ သူ့ဘက်ကလည်း ဝင်ဆွေးနွေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ ဆူးလေ Hitachi Tower နားကနေ အပေါ်လမ်းအတိုင်း လျှောက်လာလိုက်ကြတာ ပုဇွန်တောင်မီးပွိုင့်နားရောက်တဲ့အထိပါပဲ။ ခြေထောက်ညောင်းလို့ ညောင်းမှန်းတောင်မသိပါဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဝေါခနဲရှဲခနဲ မိုးအော်သံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ တမုဟုတ်ချင်းပဲ မိုးစက်လေးတွေ ဖွဲခနဲကျဆင်းလာတယ်။ နီးရာသစ်ပင်ကြီးတစ်ခုအောက်ကို ပြေးဝင်လိုက်ကြပြီး ကျွန်တော့်တုိ့အဖြစ်ကို ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ရင်း ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ ရယ်မောမိကြတယ်။ဖွာဆင်းကျလာနေတဲ့ မိုးစက်မှုန်တွေကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော်ထီးမေ့ကျန်ခဲ့တယ်ဗျာ..လို့ သူ့ကိုလွှတ်ခနဲပြောမိတော့ ကျွန်မလည်းအတူတူပါပဲတဲ့။ နိုင်ငံခြားသူတွေ ထီးကိုင်ပြီးလျှောက်သွားတာ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူးလို့ ကျွန်တော်က အထွန့်တက်မိတော့ သူက ပြုံးတုံ့တုံ့နဲ့ပြန်ဖြေတယ်။ သူကနိုင်ငံခြားသူဖြစ်ပေမယ့် အခု မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့အတွက် သူ့ကိုယ်သူ မြန်မာလူမျိုးလို့ပဲခံယူထားတယ်တဲ့။ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေရတဲ့ သူ့အလုပ်အတွက်လည်း သူဂုဏ်ယူတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် မြန်မာမလေး တစ်ယောက်လိုပဲ သူနေတယ်ထိုင်တယ် သွားတယ်လာတယ် စားသောက်တယ်တဲ့။ သူ့ကိုမြန်မာမလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ လောလောဆယ်မြင်စေချင်ပါတယ်တဲ့။ သူထီးဆောင်းတတ်တယ်၊ (မရိုမသေ) ထဘီဘယ်လို ဝတ်ရမလဲဆိုတာသိတယ်၊ သနပ်ခါးလည်း လူးတတ်တယ်၊ မြန်မာစကားတချို့လည်း ကောင်းကောင်းပြောတတ်နေပြီတဲ့ (ပြောရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ကို သူသိသမျှ မြန်မာစကားလုံးတချို့ကို မပီကလာပီကလာ ရွတ်ပြနေပါသေးတယ်)။ သူ့အဖြေက ရှင်းလင်းပြီး သဘောကျစရာကောင်းလို့ ကျွန်တော်သူ့ကို အဲ့ဒီနေရာမှာတင် မတ်တပ်ရပ်ပြီး အကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ လူတန်းစားလုံးဝ မခွဲခြားတတ်ဘဲ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေအတွက် နိုင်ငံတွေအဆင့်ဆင့်ခြားပြီး တစ်နယ်တစ်ကျေးဖြစ်တဲ့ ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုမှ လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း ကျွန်တော်ကြိတ်ချီးကျူးနေမိတယ်။ မိုးမှုန်မိုးမွှားလေးတွေကပ်နေတဲ့ ငွေရောင်ဖျော့ဖျော့ သူ့ဆံပင်က အိတွဲ့တွဲ့လိပ်ခွေဆင်းနေပြီး ရှင်းလင်း ချောမွေ့နေတဲ့ သူ့မျက်နှာပြင်လေးက တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ ကျက်သရေရှိလိုက်တာ...။(၅) မိုးက မစဲတော့တဲ့အပြင် လေကြမ်းတွေပါခတ်လာပြီး ပိုလို့ပိုလို့ သည်းလာပါတော့တယ်။ အနားမှာတွေ့တဲ့ ကွမ်းယာဆိုင်ကနေ ကျွန်တော် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်၂အိတ်ဝင်ဝယ်လိုက်ပြီး လွယ်အိတ်ထဲက ရှိသမျှ စာအုပ်တွေရော အကုန်လုံးကို အိတ်နဲ့ ၂ထပ်စွပ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှ လွယ်အိတ်ကြိုးကို ခပ်တိုတိုကြပ်ပြီး ပြန်လွယ်လိုက်တယ်။ သူက ကျွန်တော်လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး ဘာတွေသဘောကျနေလေတယ် မသိ။ ပြုံးစိစိ ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့ လုပ်နေတယ်။ အဲ့ဒီနောက် သူက ကျွန်တော်လုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ဆိုတယ်။ မိုးရေထဲ လမ်းလျှောက်ကြရအောင်တဲ့။ သူကမိုးရွာရင် သိပ်ပျော်တယ်ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မိုးရွာတာကို နှစ်သက်ပေမယ့် သူ့လောက်ကြီး လိုလိုလားလား ခုံခုံမင်မင်ကြီး မိုးကိုမစွဲလမ်းဘူး။ သူငယ်ငယ်လေးတုန်းက ဝေးလံလှတဲ့ကျောင်းကို မိုးရွာကြီးထဲမှာ မိုးကာအင်္ကျီလေးဝတ်ရင်း စက်ဘီးလေးနဲ့သွားရသတဲ့။ သူကျောင်းကပြန်လာရင် သူ့မေမေက ပေါင်မုန့်ခြောက်နဲ့ ဘီစကွပ်နွေးတွေ စီစဉ်ထားပြီး ကော်ဖီကျဲကျဲတစ်ခွက်ကို အဆင်သင့်ဖျော် စောင့်နေလေ့ရှိတယ်တဲ့။ သူငယ်ငယ်တုန်းက ချို့ချို့တဲ့တဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝနေ့ရက်တွေကို တမ်းမှန်းလွမ်းဆွတ်ရင်း ကျွန်တော့်ကို သူပြောပြဖူးတယ်။ သူနည်းနည်းကလေးမှ အားငယ်သိမ်ငယ်မှုမဖြစ်ခဲ့ဘဲ သူ့မေမေနဲ့အတူ ဘဝကိုမိုးရေစက်တွေကြားမှာ ရဲရဲကြီးဖြတ်သန်းလာခဲ့တယ်တဲ့။ သူ့ရဲ့ပြတ်ကြောမာထန်နေတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို သူ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာတောင် ကျွန်တော်တွေ့နေခဲ့ရတာပါ။သူက အဲ့ဒီလိုစကားဆိုတော့ ကျွန်တော့်မျက်လုံးထဲ ဒရာမာရုပ်ရှင်ကားတွေထဲကလို မိုးရွာကြီးထဲ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး လက်အတူ တွဲပြီး လမ်းလျှောက်ကြတယ်ပေါ့။ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ရှက်ရယ်ရယ်လိုက်မိတာကို သူကသေချာအကဲခတ်နေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ပိုလို့တောင် ရှက်သွားပြီး ဟိုဘက်ကားလမ်းမဆီကို မျက်နှာလွှဲပစ်လိုက်တယ်။ သူကကလေးတစ်ယောက်ကို ခပ်မင်မင် ချော့မြှူတဲ့စတိုင်လ်နဲ့ ကျွန်တော့်ဆံပင်နက်တွေကို ခပ်ဖွဖွပုတ်ပြီး ရယ်မောနေတယ်။ အင်း.. တကယ်လည်း ကျွန်တော်က သူ့မောင်ငယ်သာသာအရွယ်လေးပဲ ရှိတာကိုး။ ကျွန်တော် ဘာမှပြန်မပြောဖြစ်လိုက်ပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ခု ဆွတ်ပျံ့မှုကလေးတော့ သူ့လက်ဖွေးဖွေးတွေကတစ်ဆင့် ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ထဲအထိ နွေးခနဲစီးဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။(၆) သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံး အတော့်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်မိုးအရမ်းသည်းတော့ လမ်းဆက် လျှောက်လို့ မကောင်းတော့တဲ့အတွက်ရော သူအအေးမိမှာစိုးတဲ့အတွက်ရော ကျွန်တော်ကလောလောဆယ် ကားစီးသွားကြပြီး လမ်းလျှောက်ချင်ရင် သူ့ဟိုတယ်လ်အနီးအနား တစ်နေရာရာရောက်မှပဲ ဆင်းလျှောက်ကြတာပေါ့လို့ တိုက်တွန်းတော့ သူကကြည်ကြည်ဖြူဖြူ သဘောတူပါတယ်။ ဒါမှလည်းသူ့အတွက် အဆင်ပြေမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်လို့ပါ။ သူ့ကိုလိုက်ပို့ပြီးမှ ကျွန်တော်ကကားတစ်စီးစီးနဲ့ ဖြစ်သလိုပြန်လည်းရတာပဲ။ သူ့တိုက်တွန်းချက်အတိုင်း ကျွန်တော်တုိ့ တွေ့တဲ့နေရာကနေတားပြီး လိုင်းကားစီးလိုက်ကြပါတယ်။ သူကဘတ်စ်ကား စီးရတာကို အသားကျနေသလို ပျော်လည်းပျော်တဲ့ပုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဟိုင်းလက်စ်ကားဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူ့ကို ခေါင်းခန်းထဲမှာ ထိုင်စေပြီး ကျွန်တော်က အနောက်မှာပဲနေရာရပါတယ်။ မိုးကမရပ်တော့ပါ။ နေတောင် အတော်စောင်းသွားပြီ။ ထီးမထည့်ခဲ့မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျွန်တော်ဆဲလိုက်မိတယ်။ ရာသီဥတုကိုယ်၌ရော၊ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးရော ခပ်စိမ့်စိမ့် ဖြစ်နေကြပါပြီ။တာမွေအဝိုင်းထိပ်ကနေ ကားတစ်ခါပြောင်းစီးကြရပြန်ပါတယ်။ တော်သေးတာက ကားသိပ်မကြပ်တာပါ။ သွားမှာက Sedona Hotel မဟုတ်လား။ သူက ရန်ကုန်မှာနေသမျှ ကာလပတ်လုံး Sedona (ဒါမှမဟုတ်) Summit Park View နှစ်ခုမှာပဲ တည်းလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်လစာဖြစ်ဖြစ် ကြိုတင်ငွေချေထားနှင့်ပြီး မန္တလေးရုံးခွဲဆင်းရတဲ့အခိုက် ဆိုရင်လည်း မန္တလေးကမြမန္တလာဟိုတယ်လ်မှာပဲ တည်းတတ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်လ်က ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တောင် သူအတော်ခင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်စီးတဲ့ ကားကတော့ကားကြီးမို့ ကျွန်တော်တို့နေရာမရတောင် ချောင်ချောင်ချိချိ မတ်တပ်ရပ်ရင်း စကားတွေတရစပ်ပြောနေမိကြတယ်။ ကားပေါ်ကခရီးသည်တချို့က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့်နဲ့။ ဆူညံနေလို့နဲ့တူပါရဲ့။ ကျွန်တော်တို့လည်း ရုတ်တရက်ရယ်မောရင်း အသံကျယ်သွားလိုက်.. ရှူး..ဆိုပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သတိပေးလိုက်၊ ထပ်ရယ်လိုက်နဲ့ အင်မတန်ပျော်ရွှင် လတ်ဆတ်နေတဲ့ မိုးသည်းညဦးပိုင်းလေး ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။(၆) Sedona မရောက်ခင် တစ်မှတ်တိုင်အလိုမှာဆင်းလိုက်ကြပြီး ကျွန်တော်တို့ စိတ်ကူးယဉ်ထားကြသလို ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းအတိုင်း မိုးသည်းသည်းထဲ လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မိုးစက်တွေ ဖွားခနဲဖွားခနဲ လွင့်စင်သွားတဲ့ ကတ္တရာလမ်းမကြီးရဲ့ရင်ဘတ်က ကျွန်တော့် နှလုံးခုန်သံနဲ့ထပ်တူ အပြိုင်လှုပ်ခတ်ဟစ်ကြွေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကတော့တရားဝင်ဖော်ထုတ်ခွင့်ရှိပြီး ကျွန်တော်ကတော့ အသံတိတ် လှိုက်ဖိုနေရတာပါ။ ကားတွေ တစ်စီးစ၊ နှစ်စီးစ ဖြတ်ဖြတ်သွားကြတယ်။ Lauraine က မျက်နှာလေးခေါင်းမော့ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်တန်းရင်း ဖိနပ်ဖြူလေးကိုချွတ်၊ လက်ကကိုင်ပြီး ရှေ့ ၄၊ ၅ ကိုက်လောက်ကို ပြေးသွားပါတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း မြန်မာလို အော်လိုက်ပါသေးတယ်။ “ကျွန်မ မိုးကိုချစ်တယ်” တဲ့....။ တစပ်တည်း B.J. Thomas ရဲ့ သီချင်းစာသားလေးတစ်ခုကို ခပ်တိုးတိုး ရွတ်လိုက်တယ်။ိ“Raindrops keep fallin' on my headBut that doesn't mean my eyes will soon be turnin' redCryin's not for me'Cause I'm never gonna stop the rain by complainin'Because I'm freeNothin's worryin' me . . . .”ဖွဖွလေးနင်းသွားတဲ့ သူ့ခြေဖဝါးဖြူဖြူတွေမှာ စင်ကြယ်တဲ့မိုးစက်တွေကပ်ပါသွားတယ်။ အင်းလျားကန်ရေပြင်ကို တရစပ်သုတ်ဖြူး ဖြတ်တိုက်လာတဲ့ လေညင်းအေးအေးကြောင့် ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်စိမ့်သွားပေမယ့် ကလေးငယ်တစ်ဦးလို မိုးရေထဲပြေးလွှား အော်ဟစ်နေတဲ့ သူ့ကိုမှင်သက်တိတ်ဆိတ်စွာပဲ ကြည့်နေမိခဲ့တယ်။ လှလိုက်တာ Lauraine ရယ်....။(၇) သူ ကျွန်တော့်ဘက်ကို မျက်နှာပြန်မူလိုက်ပြီး နောက်ပြန် ခပ်ဖြည်းဖြည်းလေး လမ်းလျှောက်တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း တုံ့နှေးတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပေါ့။ ခဏတာတွေကို ကျွန်တော်သိပ်မြတ်နိုးတတ်နေပြီလေ။ Sedona Hotel ကြီးကတော့ မီးရောင်တွေတထိန်ထိန်နဲ့ ဟိုရှေ့နားမှာ ကျွန်တော်တို့ကို မိန့်မိန့်ကြီး ထိုင်စောင့်နေပြီ။ သူလေးကတော့ သိပ်ပျော်ရွှင်မြူးထူးနေတဲ့အပြုံးနဲ့ ခေါင်းလေးကို ဘယ်ယိမ်း ညာယိမ်းလုပ်နေတယ်။ လမ်းမကြီးတစ်ခုလုံး သူနဲ့ကျွန်တော် နှစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့အတိုင်း။ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းလို့..။ သူ့ခြေလှမ်းတွေကို ရုတ်တရက် တုံ့ခနဲရပ်လိုက်ပြီး မကြည်မလင်ဖြစ်နေဟန်တူတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို သေချာစိုက်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့မေးတယ်။ မပျော်ဘူးလားတဲ့...။ မိုးရေတွေထဲ ကျွန်မနဲ့လမ်းလျှောက်ရတာကိုလေတဲ့...။ သိပ်ပျော်တာပေါ့.. လို့ ကျွန်တော်က ပြောလိုက်ပြီး သူ့နောက်ထပ် မေးခွန်းမလာခင် တခါတည်း ဆက်ဖြေလိုက်တယ်။ “But. . . I'm feeling so afraid if you could never be with me like this moment ever again!”သူ ရယ်ပါလေတယ်။ ပြီးတော့မေးတယ်။ အခုချိန်မှာ ကျွန်တော်ရောသူရော ထီးကိုယ်စီပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင် အခုလို လမ်းလျှောက်ကြဖို့ ဖြစ်လာဦးမယ်ထင်လားတဲ့။ ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး။ လျှောက်ဖြစ်ကြဖို့ သူကစပြီး အကြံရလို့ ကျွန်တော်တောင် အံ့သြခဲ့ရသေးတာမဟုတ်လား။ ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး သူ ထပ်ရယ်ပြန်တယ်။ ကျွန်တော်အသည်းယားလာတယ်။ သူကဆက်ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ရော သူရော အမြဲ ထီးကိုင်ဖြစ်ကြတာချင်းအတူတူ ဒီနေ့ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် နှစ်ယောက်စလုံးက ထီးမေ့ကျန်ခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ မြို့ထဲတစ်နေရာမှာ လာဆုံဖြစ် ကြတယ်။ ပြီးတော့ မိုးရွာတော့မှာ သိသိကြီးနဲ့ မရွာလောက်သေးပါဘူး၊ ရွာတော့လည်း ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် လျှောက်မှာပဲဆိုတဲ့ မသိစိတ်ကနေ လက်ခံတိုက်တွန်းလို့ အခု ဒီနေရာကိုတောင် ရောက်နေကြပြီတဲ့။ အဲ့ဒါကို destined အရ ဖြစ်လာတာပါလို့ မယူဆကြဘူးဆိုပါစို့...။ ဒါဆို ဒီအခြေအနေဖြစ်လာအောင် ဘယ်သူစေခိုင်းခဲ့တာလဲတဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ပေါ့လို့ ကျွန်တော်က ဖြေလိုက်တယ်။ သူက လက်မကလေးထောင်ပြပြီး ဒါပဲပေါ့..ဆိုတဲ့ ပုံစံမျက်နှာပေးလုပ်ပြတယ်။ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်။ သူဆိုလိုတာက နောက်တစ်ကြိမ် ဒီလိုအခြေအနေမျိုး ဒီလိုအခိုက်အတန့်မျိုးကို ဖန်တီးချင်ရင် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်အပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်ဆိုတဲ့သဘော။ သူက ကံကြမ္မာဆိုတာကို သိပ်ယုံကြည်ပုံမရဘူးလို့ ကျွန်တော် ခပ်မဆိတ် တွေးလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ ပျော်နေရမယ့်အစား ဝမ်းနည်းအားငယ်သလိုလို၊ အင်အားချိနဲ့နေသလိုလို ခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မျက်လုံးတွေထဲကအပြုံးကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနဲ့ အားတင်းပြီး တုံ့ပြန်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ပုခုံးလေးကို ညာလက်နဲ့ သိုင်းဖက်လိုက်တယ်။ သူက အလိုက်တသိပဲ ဦးခေါင်းလေးကို ကျွန်တော့်ပုခုံးဆီ မှီငဲ့လိုက်တယ်။ အခုမှ ကျွန်တော် အစစ်အမှန် ပြုံးနိုင်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ကိုက အတွေးခေါင်ပြီး ပူတတ်ရန်ကောလေ.. လို့ပဲ စိတ်ထဲမှာ မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ ခုနက လေးနေတဲ့ စိတ်တွေ အားငယ်နေတဲ့စိတ်တွေ မိုးစက်သစ်တွေနဲ့အတူ ပြန်ပြီးပေါ့ပါးလန်းဆန်းလာတယ်။ မိုးတွေကလည်း အေးလိုက်တာ...။(၈) ကျွန်တော်... ဟိုတယ်လ်နားရောက်လေ မပြန်ချင်တော့လေ... နောက်ပြီး... သူနဲ့မခွဲချင်တော့လေ...။ ဒါပေမယ့်ခွဲခွာခြင်းဆိုတဲ့ ဓမ္မတာကြီးကို ဘယ်သူလွန်ဆန်နိုင်လို့လဲ။ ခေတ္တခွဲခွာရခြင်းဖြစ်ပါစေလို့ပဲ ကျွန်တော်ကြိတ်ဆုတောင်းနေမိတယ်။ ဟိုတယ်လ်ဘေးက စက်မှု(၁)လမ်းပေါ်ရောက်တော့ သူကဖိနပ်ဖြူလေးကို ပလက်ဖောင်းပေါ်ပစ်ချလိုက်ပြီး စိုရွှဲနေတဲ့လက်တွေနဲ့ ကျွန်တော့်ခါးကိုဖက်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ရီဝေဝေကြည့်တယ်။ သူလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ ခံစားနေရမလား...။ ခုထိ ကျွန်တော်သူ့ကို ချစ်ပါတယ်လို့ မပြောရသေးဘူး။ ခုချိန်မှာ ချက်ချင်းပြောဖို့ လိုအပ်သလား၊ မလိုအပ်ဘူးလား.. ကျွန်တော် တကယ်မသိပါဘူး။ ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဒီလောက်မချစ်ခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါ ပထမဦးဆုံးပဲ။ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်နေပြီ။ သူကရော..? ကျွန်တော် သူ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေမိတာ ဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲမသိ။ သူက ကျွန်တော့်နဖူးကို ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်တော့မှပဲ အသိပြန်ဝင်လာတယ်။ ပျော်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မပြုံးပြလိုက်ပါ။ကျွန်တော် တစ်ကုန်လုံးချမ်းစိမ့်ပြီး မေးတွေပါတုန်နေပြီ။ သူလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ။ သူက ပြုံးတုံ့တုံ့ကြည့်ပြီး အထဲဝင်ရအောင်လေ တဲ့။ မိုးတိတ်မှ ပြန်ချင်လည်းပြန်ပေါ့တဲ့။ ကျွန်တော် ကြောင်သွားတယ်။ ကျွန်တော် လိုက်သွားလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ရွှဲနစ်နေတယ်။ အဝတ်လဲဖို့ လိုအပ်တယ်။ သူ့ဆီမှာမှ အဝတ်အစားမရှိဘဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် နွေးနွေးထွေးထွေးနေပြီး တစ်ခုခုစားရမယ်။ ပြီးရင် ကျွန်တော်အိမ်ပြန် အိပ်ရမယ်။ ကျွန်တော် အိမ်ကိုဘာမှမပြောခဲ့ရဘူး။ ပြီးတော့ မိုးကလည်း တစ်ညလုံး သည်းမယ့် ရန်ကုန်မိုးစွေ။ တော်တော်နဲ့တိတ်မယ့်ပုံမှမပေါ်တာ။ သူနဲ့ကျွန်တော် တွေ့တာဒါနဲ့မှ ဒုတိယအကြိမ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော်သူ့ကို ချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်တာ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်... ကျွန်တော်... အသက် ၁၈နှစ် မပြည့်သေးဘူး....။ သူက ကျွန်တော့်ထက် အသက်အများ ကီးကြီးတယ်။ ရှေ့ဆက်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား...။ ရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုထပ်ရင်ဆိုင်ကြမလဲ...။ ဟာ.. ဘာတွေလဲကွာ....။ အဲ့ဒီတခဏလေးမှာပဲ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းနဲ့ မြင်ကွင်းတွေဟာ ချာချာလည်နေတယ်လို့ ခံစားရပြီး ရှေ့တည့်တည့်မှာရပ်နေတဲ့ သူ့ကို သေချာမမြင်ရတော့ဘူး။ မိုးစက်တွေက ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို ဝေဝါးစေတယ်။ သူလည်း မိုးတွေစိုရွှဲနေတာ။ သူ အဝတ်လဲရမယ်။ အထဲမှာ နွေးနွေးထွေးထွေးနေရမယ်။ ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ဖို့ ကျွန်တော် သူ့ကိုပြောရမယ်။ ညစာပူပူလေးမှာစားဖို့။ ပြီးရင် စောစောအိပ်ပစ်ဖို့...။ မနက်ကျရင် ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းဆက်ဖို့။ သြော်.. ကျွန်တော်သူ့ကို ဖုန်းနံပါတ်လည်း ပေးရဦးမယ်။ ဒီညတော့ မဖြစ်.... မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းက လှုပ်ရုံလေးပဲလှုပ်တယ်။ စကားတွေတစ်ခွန်းမှထွက်မလာဘူး။ကျွန်တော် ခေါင်းကိုခပ်ဖြည်းဖြည်းခါလိုက်ပြီး ဒူးတွေညွတ်ကျတော့မတတ်ဖြစ်လာတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကို ပြန်တွဲရတယ်။ အမိုးအောက်ဝင်ကြစို့တဲ့...။ ကျွန်တော့်မျက်နှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာ မှန်သာရှိရင် ကျွန်တော်ကြည့်ချင်လိုက်တာ။ ရပါတယ်.. ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းက နာရီများစွာကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကထွက်ကျလာတယ်။ လေးတေးတေးကြီး။ သူက ချမ်းလှပြီ.. ကျွန်မအထဲဝင်တော့မယ်တဲ့..။ ကျွန်တော့်ကို လိုက်မှာလား၊ ပြန်မှာလားတဲ့။ သူ့မျက်ဝန်းထဲမှာ မကျေနပ်တဲ့ အားမလိုအားမရတဲ့ အရိပ်အယောင်ကို ကျွန်တော်အားကိုးတကြီး မချင့်မရဲလိုက်ရှာမိတယ်။ လုံးဝမတွေ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့အသံက နည်းနည်းထန်နေသလားလို့။ ကျွန်တော်စိတ်ထင်တာပဲဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုချစ်သလားလို့ သူ့ကိုဗြုန်းစားကြီး မေးလိုက်ချင်တာလေ....။ ဒါပေမယ့် အဆင့်အတန်း...၊ အသက်အရွယ်...၊ နောက်ပြီး လူမျိုး... ၊ တန်ဖိုး....၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ....၊ အဲ့ဒါတွေရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ “အချစ်”လား...။(၉) ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ စကားလုံးပေါင်းမြောက်များစွာကို ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို ကျွန်တော်စီကာပတ်ကုံး ပြောရမယ်မှန်းမသိဘူး။ ကျွန်တော် သိပ်တုံးသိပ်အ, တာပဲ။ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်မုန်းတယ်။ သူ ကျွန်တော့်လက်တွေကိုလွှတ်ပြီး ချာခနဲ ဟိုတယ်လ်ဘက်ကို လှည့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ “K.. K.. Keep warm. Sleep tight!” ဆိုတဲ့ စကားနှစ်ခွန်း ခလုတ်တိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကထွက်သွားတယ်။ အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့။ ထပ်ထွက်မလာတော့ဘူး။ ပြောတယ်။ လုံးဝ ထွက်မလာဘူး။ မေးတွေက တရစပ်တုန်နေတယ်။ ခြေထောက်တွေပါ တဆတ်ဆတ်ဖြစ်လာတယ်။ သူက လှည့်ကြည့်တယ်ဆိုရုံလေးနဲ့ “You too.” တဲ့။ ကျွန်တော်လက်ပြတယ်။ Lobby ထဲဝင်တဲ့ မှန်တံခါးထဲကနေ သူကျွန်တော့်ကို လက်ပြန်ပြတယ်။ ပြီးတော့ မြင်ကွင်းကနေပျောက်သွားတယ်။ သူ့ကို ကြည့်ရတာ ဘာမှမခံစားရသလိုပါပဲလား..။ သူ့ထုံးစံ အတိုင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လွတ်လွတ်လပ်လပ်။ ကျွန်တော် လေးကွေးထှိုင်းမှိုင်းနေသလောက် သူကတော့အမြဲသွက်လက်တက်ကြွလို့..။ အခုလေးတင် ကျွန်တော်ရှေ့တည့်တည့်မှာရှိနေသေးပြီး မျက်တောင်တစ်မှိတ်မှာပဲ မရှိတော့ဘူး။ သြော်.. ဥရောပသူ ဒေါက်တာမကြီးရယ်....။အဲ့ဒီနေရာကနေ ကျွန်တော်တစ်ဖဝါးမှ မခွာမိဘူး။ လှုပ်တောင် တုပ်တုပ်မလှုပ်ဝံ့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားမလည်ဘူး။ ရှက်ရွံ့၊ အားငယ်၊ ယောင်ချာ၊ ကြောင်စီ၊ ပူပင်၊ ငေးဆွေး၊ နှေးကွေး၊ နောက်ထပ် ဘယ်စကားလုံးနဲ့မှ နှိုင်းယှဉ်မပြတတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ဘာကို ထိတ်နေတာလဲ၊ ဘာကိုကြောက်နေတာလဲ၊ ဘာကိုရွံ့နေတာလဲ၊ ဘာကိုစိုးနေတာလဲ၊ ဘာကို...... ဘာအတွက်...... ဘာလို့........??? ဟူး.........။ ကျွန်တော့်လို ငတုံးတစ်ယောက်အတွက် မေးခွန်းတွေက မိုးရေစက်တွေနဲ့အမျှ များပြားခဲစက်နေစေတော့တယ်။ ခုချိန်မှာကျွန်တော် သတိရတောင့်တနေမိတာက ကျွန်တော့်ကိုလောလောဆယ် လုံခြုံအောင် မိုးမပေးနိုင်ရှာတဲ့ အိမ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ထီးလေးရယ်ပါ...။(၁၀) ကျွန်တော်အိမ်ကို ဘယ်လိုပြန်ရောက်ခဲ့သလဲ မသိခဲ့ပါ။ ဘယ်အချိန်ပြန်ရောက်ခဲ့သလဲ မသိခဲ့ပါ။ ဘယ်လမ်းတွေကဖြတ်လာပြီး ဘယ်ယာဉ်နဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့သလဲ မသိခဲ့ပါ။ ပြီးတော့.. ကျွန်တော် ဘယ်နှစ်ရက် အိပ်ပျော်သွားခဲ့သလဲ မသိခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်သိတာက... ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ပူပန်ကြောင့်ကြတဲ့ မျက်နှာတွေနဲ့ ကျွန်တော့်မိသားစု။ သူတို့ရဲ့အနောက် နံရံမှာချိတ်ထားတာက ခြောက်သွေ့ တွန့်ကြေနေပြီဖြစ်တဲ့ Adidas အိတ်အနက်ကလေး။ ကျွန်တော့်အိပ်ရာဘေးမှာက တွန့်လိမ်စုတ်ပြတ်နေတဲ့ စာအုပ်တချို့။ “ထီး.. ထီး..” လို့ ကျွန်တော် အလန့်တကြားရေရွတ်မိတော့ မေမေက ကျွန်တော်ဆောင်နေကျ ဖဲထီးလေးကိုကမ်းပေးတယ်။ ကျွန်တော်ဆွဲယူလိုက်ပြီး ရင်ခွင်ထဲမှာ တအားပွေ့ဖက်ထားလိုက်မိတော့တယ်။သီတင်းပတ်နည်းနည်းတော့ ကြာသွားခဲ့ပြီ။ ရန်ကုန်လမ်းညွှန်ထဲက ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Sedona က receptionist တစ်ယောက်ကို မေးမြန်း ကြည့်တယ်။ ထင်တဲ့အတိုင်း သူ ဟိုတယ်လ်မှာ မရှိတော့ပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ခုများ စကားချန်သွားမလားလို့ သေချာမေးပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ပြောကြည့်ပါတယ်။ ထူးမခြားနားပါပဲ။ ကျွန်တော်ဖုန်းပြောနေရင်းက လက်တွေတုန်လာပြန်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း နင့်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ တဆက်တည်းမှာ ရင်ဘတ်ထဲကနေ တဒုတ်ဒုတ်မြည်လာပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာဖြစ်တာလဲမသိ..။ ဖုန်းမပြောခင်က နှစ်နာရီလောက် ကြိုစဉ်းစားထားပြီးဖြစ်တဲ့ သူ့အတွက် ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပါတ်လေး ချန်ပေးခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးက မြွေလာဖားပျောက် ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော် မျက်လုံးတွေကို တအားမှိတ်ပစ်လိုက်ပြီး ကျေးဇူးတင်စကားတောင် မပြောဖြစ်တော့ဘဲ ဖုန်းခွက်ကို ချလိုက်မိတယ်။ မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ဖွင့်ချင်း လှမ်းကြည့်မိလိုက်တာက ကျွန်တော့်စာရေးစားပွဲပေါ်က ဖဲသားခေါက်ထီးလေး။ ကျွန်တော့် ညာလက်ဖဝါးက ကျွန်တော့်နဖူးပြင်ကို အမှတ်တမဲ့ ယောင်ယမ်းပြီးစမ်းလိုက်မိပါတယ်။ တခါတရံစကားလုံးတွေက နိမိတ်ကြိုတွေ ဖြစ်ဖြစ်သွား စေတတ်ပါသလား။ “Raindrops keep fallin' on my headBut that doesn't mean my eyes will soon be turnin' red”အဲ့ဒီသီချင်းကို ကျွန်တော် ဒီနေ့ထိ မကြိုက်သေးဘူး။နိဂုံး ___ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ တိုက်ရိုက်အချိုးကျစွာပဲ အပြစ် (သို့မဟုတ်) ရွံ့နောင်တဆိုတာမျိုးက ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရာဇဝင်ကျမ်းမှာ အနည်းဆုံး စာမျက်နှာတစ်ခုစာတော့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခံစားချက်တွေ အနာကျက် သွားပေမယ့် ဒီကနေ့ထိ ကျွန်တော့်နှလုံးသားထဲက အချစ်စစ်အတွက်တော့ ကျွန်တော် လိပ်ပြာလုံစွာနဲ့ ဆစ်ခနဲနာကျင်တတ်ဆဲပါ။ ။Craton ၂၀.၈.၂၀၁၀
တခြားဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်တင်မယ်ဆိုရင် Craton (MYMC) ကို Credit ပြန်ပေးပါ။ MYMC က တင်ထားပေးတဲ့ ၀တ္တုလေးတွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေကို အကြိုက်တွေ့ကြတာသိရလို့ ထပ်ပြီးရေးခိုင်းမယ်လို့ စိတ်ကူးတုန်း Craton က အချစ်ဇာတ်လမ်းဝတ္ထုတစ်ပုဒ် အခုပဲရေးပြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ ညီရေ..တင်ရအောင်ကွာဆိုပြီး တင်ဖြစ်သွားတာပါ။ ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ပြီးသဘောကျတယ်၊ ရင်ထဲကိုထိတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုရေးခဲ့ပေးပေါ့ဗျာ။ (မဟူရာ)
Content View Hits : 8514999